က Man သူ့ကိုယ်သူဖြောင့်မတ်စေလို့မရပါဘူး။
ကမျြးစာကိုလူတဖြောင့်မတ်ကြောင်းပြောပါတယ်သောအခါ, ယရှေုခရအပေါ်ကျရောက်ဘုရားသခငျသညျဖွောငျ့မတျထဲကနေသူမသူမသည်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြင့်သူ၏အပွစျလကျမှလှသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်အပြစ်လွှတ်သောသူသည်။
မျှတမှုနှင့်ဖြောင့်မတ်မ၏သဘောတရားများကိုခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏လုံးဝအလယ်ပိုင်းအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစကားလုံးကမျြးစာ၏ဆှီဒငျဘာသာကိုအပြစ်လွတ်မူရင်းဂရိစာသား, "dikaíoo" ဟူသောစကားလုံးနည်းလမ်းများတရားဝင်အပြစ်မဲ့တစ်စုံတစ်ဦးကိုကြေညာရန်တစ်ကြိယာတစ်ခုဖြစ်သည်ထံမှဘာသာပြန်ထားသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသူမရှိပြီးဒုစရိုက်ဖြေကျမှလှသည်။ သင်တစ်ဦးကိုတရားရုံးတစ်ဂျူရီသို့မဟုတ်တရားသူကြီးတစ်ဦးက "အပြစ်ရှိခြင်းမရှိ" အချို့ကရှင်းပြသည်သောအခါအများ၏ concept ကိုနှိုငျးယှဉျနိုငျသညျ။
က Man သူ့ကိုယ်သူဖြောင့်မတ်စေလို့မရပါဘူး။ ရှင်ပေါလု2ကောရိန္သု 5:18, 19 ခုနှစ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်
"အရာအားလုံးခရစ်တော်အားဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုယ်မှကျွန်တော်တို့ကို ပြန်. များနှင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၏ဝန်ကြီးဌာနကပေး၏တော်မူသောဘုရားသခင်၏အနေဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အဘို့ကိုယ်ကိုကိုယ်မှကမ္ဘာကြီးကိုပွနျလညျသငျ့မွခရစျတျော၌ရှိ၏။ သူသည်သူတပါးအပြစ်မတွက်, သူသည်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်မြတ်ရေး၏အမိန့်တော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်။ "
"ခရစ်တော်ယေရှုသူတို့ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသောကြောင့်အားလုံးပွစျမှားပါနှငျ့ဘုရားသခငျ၏ဘုန်းအသရေပျက်ကြ, သူ၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကရရှိခဲ့ကြလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြောင့်မတ်နေကြသည်ပြီ။ " ရောမ 3:23, 24
ရောမ5"။ ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခံရ, ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်အတူငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစား": 1
ဒါဟာနှင့် ပတ်သက်. မျှတမှုမှကြွလာသည်ဟုသာကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့လူကိုပညတ်တရား၏အကျင့်အားဖြင့်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်သည်မဟုတ်ကိုသိကတည်းက "ဒါပေမယ့်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်အားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်, အကျင့်တရားစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်အပြစ်နှင့်လွတ်စေခြင်းငှါ, ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ကြ၏။ အဘယ်သူမျှမဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပညတ်တရား၏အကျင့်အားဖြင့်အဘို့။ "ဂလာတိ 2:16
ဒါဟာမျှတမှုယေရှု၏ယဇ်ပူဇော်သေခြင်း, သူ့အဘို့ကယ်တင်ခြင်းကို / မျှတမှုအစေခံဖို့တစ်ဦးချင်းစီ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လက်ခံရရှိခံရဖို့သို့သော်လိုအပ်မှတဆင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တရားဝင်သည်။
အဘယ်သူမျှမနှုန်း-အလိုအလျောက်-ကယျတငျတျောမူသောအရှင်ရှိပါသည်။ ဤအရေးကြီးသောဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ!
2 ကောရိန္သု 5:20, 21 ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကြောင့်သံတမန်ဖြစ်ကြ၏ဒီတော့ "ကိုဖတ်ပါ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုမှတဆင့်သည်သူ၏အယူခံဝင်အောင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားမေးမြန်းပါ ဘုရားသခငျအား ပြန်. ခံရ။ အပြစ်မရှိသူသိသောသူသည်, ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရာအရပျ၌အကြှနျုပျတို့သညျဘုရားသခငျ၏ဖြောင့်မတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဘို့, အပြစ်ဖြေရာဖြစ်စေတော်မူပြီ။ "
ပင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မျှတမှုများဖတ်ပါ။ နှစ်ဦးစလုံး 1 ထှကျမွောကျရာ 15: 6, ရောမ 4:3နှင့်ဂလာတိ 3:6သူသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဘယ်လိုနှင့်ဖြောင့်မတ်သူ့ကိုမှတ်ပုံကိုအာဗြံသည် (= အာဗြဟံသည်) နှင့်ပတ်သက်ပြီးကပြောပါတယ်။ ရော 3:21, 22 ခုနှစ်တွင်ပေါလုသည်ယခုဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ပညတ္တိကျမ်းဖြစ်ခြင်း, ထင်ရှားခဲ့ပြီးပရောဖကျအသကျသခေံ, ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အဘို့ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်တည်းဟူသော, ဖြောင့်မတ်ထမ်းသောကပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့ပညတ္တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းနှစ်ဦးစလုံးဟာအရင်ကယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မျှတမှုဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပုံကိုဤကျမ်းပိုဒ်များတွင်ကြည့်ပါ။ ကမျြးစာကိုကျနော်တို့မသာယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေမယ့်လည်းသူကသူ့ကိုယ်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ဖြစ်လာအကြောင်းကိုဘယ်လို! ယေရမိ 23:6ယေရမိ 33:16 ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ဖြောင့်မတ်ပြော၏။ ရှင်ပေါလု 1 ကောရိန္သု 1:30 အတွက်ကပြောပါတယ်
"သူကသငျသညျဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဉာဏျပညာ, ဖြောင့်မတ်, သန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့်ရွေးနှုတ်ရန်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီဘယ်သူကိုယေရှုခရစ်၌နေသောများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရန်သင့်ရှိပါတယ်"
ယရှေုသညျခရစျတျော, သူ့ကိုယုံကြည်သောသူတို့အရေတွက်သောသူ၏ဖြောင့်မတ်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်သောအဘခမည်းတော်ဖြောင့်မတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်တော်မူ၏စေသည်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုရေးသားချက်များအတွက်ယခုဖတ်ရှုရင်းသူမဧဒင်ဥယျာဉ်၏ဥယျာဉ်တော်၌ရှိသောအခါ, ယရှေုခရစျသကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်တွေအကြောင်း, ဒါကြောင့် lurch ၌ဘုရားသခင်လုပ်ယောက်ျားသည်သူ့ကိုဆန့်ကျင်ညျပွစျမှား, မိမိလမ်းကိုသွားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကတတ်နိုင်သမျှလူကိုယျတျောနှငျ့အတူတစ်ထူထောင်ငြိမ်းချမ်းသောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်ဖို့အဘို့လုပ်အားမိမိချစ်ရာသခင်သည်သားတော်ယေရှု, ပေးပို့ခြင်း, ကယျတငျတျောမူသောဘုရားသခငျသညျအစီအစဉ်အကြောင်းကိုဖတ်ပါရှိသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သခင်ယေရှု၏အသေခံခြင်း, ယောဟန် 8:24 အတွက်အကြောင်းပြောနေတာ, ငါတို့အပြစ်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်ဟုဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ကိုရဲ့ကိုယ်ကျိုးစွန်သေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း (23-25 ရောမ 4) အတွက်မပြဘူး။
သခင်ဘုရားနှင့်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ဒီအခွန်ဆက်ကွှေးကျွောခွငျးနှင့်အတူဤ post ကိုအဆုံးသတ်စေရန်။
"ဟုသူကဘုရားသခင်၏ပုံစံပေမဲ့အကျိုးကိုအဖြစ်ဘုရားသခင်နှင့်အတူတန်းတူညီမျှရေးကိုစဉ်းစားပေမယ့်သူကလူကိုဖြစ်လာခဲ့သည်ကျွန်ချမှတ်ခြင်းဖြင့်မိမိကိုမိမိပေး၏မရခဲ့ပေ။ ကားတိုင်ပေါ်တွင်ပင်အသေခံ - လူတကိုယ်ကိုကိုယ်နှိမ့်ချခြင်းနှင့်အသေသတ်ခြင်းကိုနာခံမှုဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်သူအဆင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ကိုယ်တော်ကိုအလွန်မညျးတျောကိုဂုဏ်အသရေကိုယ်တော်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနှင့်တိုင်းနာမကိုအမှီအထက်ကိုယ်တော်နာမကိုပေးသနား, ယရှေု၏နာမကိုမှာတိုင်းဒူးညွှတ်ရမည်အကြောင်း, ကောင်းကင်, မြေကြီးပေါ်နှင့်မြေကြီးအောက်၌ရှိသမျှသောလျှာဝန်ခံသညျဘုရားသခငျထားပါတယ်ယရှေုခရကြောင်း သခင်ဘုရားက "ဖိလိပ္ပိ 2: ။ 6-11 ။
Vecka 24, torsdag 17 juni 2021 kl. 22:36